Wholesale chandelier PC300 Nordic fisotroana fisakafoanana tsotra mpamorona chandelier mpamokatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier PC300 trano fisakafoanana Nordic fisotroana forona famoronana tsotra
Bara fisakafoanana Nordic chandelier famoronana endrika tsotra
Size: antonony 45/65/85/108 / 128cm
Loharano maivana: 6-10WLED
Fitaovana: Metal + vera
Faritra azo ampiharina: 10-40m
Toerana azo ampiasaina: haingon-trano / efitrano fandraisam-bahiny, efitra fatoriana, efitrano fisakafoanana, duplex, sns. / Toerana fivarotana / toerana fialamboly
Nahazo aingam-panahy avy amin'ny rahona eny amin'ny lanitra, jiro ho an'ny mpamorona futuristika, mampirehitra ny hatsaran-tarehy maoderina. Ny jiro dia manana famaranana kanto, ny jiro tsirairay dia vita amin'ny matte fotsy boribory polygonal, ary jiro maro no atambatra eny amin'ny lanitra hamorona hazavana tsara tarehy.
Avelao ny Icaro Chandelier hameno hazavana ny efitranonao na ny efitrano fisakafoanao. Mampatsiahy ny iray amin'ireo voaloboka, ity pendant tsara tarehy ity dia tsy ho hitanao akory. Noho ny tontolon'ny fitaratra fotsy folo sy ny famaranana varahina fahagola dia ho tsara tarehy hatrany amin'ny valindrihana ny efitranonao.
Manazava ny efitranonao na ny efitrano fisakafoanao miaraka amin'ny Bermude Chandelier. Ity luminaire maoderina mamirapiratra miaraka amin'ny famaranana nikela ity dia misy globe fitaratra 10 mazava izay mampiantrano ny jirony tsirairay avy.
Mora apetraka, serivisy mahafa-po - ity jiro ity dia nahazo Certification. Ity chandelier mihaja ity dia mora manangona ny firafitry ny jiro. Vita amin'ny torolàlana mazava sy ny fitaovana fametrahana rehetra izy io, azo apetraka haingana sy mora. Raha simba na very ny ampahany mandritra ny fitaterana dia azo alamina ny fanoloana. Azafady mba mifandraisa aminay mba hisolo ny ampahany amin'ny fotoana.
Teo aloha: Chandelier PC071 Fahazavana mihaja famoronana mpamorona spiral chandelier
Manaraka: Chandelier PC-8255L Art chandelier fitaratra chandelier toetra
Chandelier 33768 Hotely labozia trano fandraisam-bahiny ...
Chandelier 33298 Labozia kanto Retro metaly pa ...
Chandelier PC039 Glass vera kanto chandelier isaky ...
Chandelier 33316 labozia kanto mirehitra hazavana ...